Ungawufumana njani umsebenzi eThailand? - ALinks
I-Thailand, ekumazantsi e-Asiya, inezinto ezininzi ezithandwayo. I-Thailand idume kwihlabathi liphela ngokhenketho lwayo. Ngaphandle kwale yabakhenkethi, uninzi lwabemi beza eThailand ukufumana imisebenzi. Imakethi yomsebenzi eThailand iya ivela minyaka le. Iingxelo ezahlukeneyo zibonisa indlela ishishini lomsebenzi eliye lavela ngayo kule minyaka idlulileyo. Okwangoku, itekhnoloji ifikelele kuwo onke amashishini kwaye yenze lula nomsebenzi wabo. Into elungileyo malunga nokufuna umsebenzi eThailand kukuba akukho mfuneko yokuba ufunde naluphi na ulwimi. IsiNgesi kuphela kolwimi apho ufuna ukufumana umyalelo wakho kwaye kufuneka utyibilika.
Ihlabathi lanamhlanje liyaziwa njengehlabathi ledijithali. Umzi mveliso we-IT ulithathile ihlabathi walisa kwinqanaba elilandelayo. Icandelo le-IT linegalelo ngenxaxheba kuninzi lwamashishini. Namhlanje uninzi lwamashishini lukhetha kwaye luhambela kwi-automation. Ukuzenzekelayo kunceda onke amashishini ukukhulisa amanqanaba emveliso. Zombini ezi IT kunye noomatshini zidlala indima ebalulekileyo kuyo yonke indawo. Alithandabuzeki elokuba le yeyona misebenzi idumileyo unokukhetha phakathi kwayo. Kananjalo uninzi lwemisebenzi ekhoyo kwihlabathi lanamhlanje inxulumene nawo omabini la macandelo kwaye zikwimfuno ephezulu kakhulu.
Ewe: Ewe imisebenzi yindawo yase-Intanethi esekwe kwi-Intanethi. Le yeyona portal inkulu kwaye ikhokelayo kwi-Intanethi eThailand. Phantse zonke iinkampani zithumela imisebenzi kule ndawo. Ewe simahla isiza seendleko apho unokukhangela khona imisebenzi ngaphandle kokuhlawula nayiphi na intlawulo.
ImisebenziDb: I-JobsDB yeyona Thailand inkulu kakhulu esekwe kwi-Intanethi. Kwi-JobsDB, unokufumana uninzi lwemisebenzi edwelisiweyo kwicandelo ngalinye. Le ndawo ikwabonelela ngeenkcukacha malunga neenkampani ezilungileyo kwiinkalo ezahlukeneyo.
Zininzi nezinye iisayithi, onokuzisebenzisa ukukhangela umsebenzi omtsha. Unokusebenzisa ezi ndawo ngokunjalo Jobthayi, Naukri, Iyonke imisebenzi.
Izinto ekufuneka uzigcine engqondweni ngaphambi kokubhabha eThailand
Ukuba ucwangcisa ukuhlala eThailand, kuya kufuneka ucinge ngomsebenzi wakho okanye umthombo wokufumana imali. Ukuba uyilungiselele ingqondo yakho kwaye uthathe isigqibo sokusebenza eThailand, ke kukho izinto ezithile ekufuneka uziqwalasele. Imibuzo emibini esisiseko ehlala icingwa ngumntu wonke:
Ngaba kufuneka ndifumane umsebenzi ngaphambi kokuya eThailand?
Okanye ndiza kuya eThailand ndiyokufuna umsebenzi khona?
Ngokungathandabuzekiyo olona khetho lufanelekileyo kule mibuzo luya kufumana umsebenzi ngaphambi kokuya eThailand. Nangona ngamanye amaxesha kunokuxhomekeka kwezinye iimeko, unokufumana emva kokufikelela apho njengoko kukho imisebenzi. Ke, kuxhomekeke emntwini ukuba ufuna ukukhangela umsebenzi kuqala okanye hayi. Uninzi lwabaqeshi okanye iinkampani ziya kubuza imibuzo efana "Kutheni ucinga iThailand ukwenza umsebenzi wakho?".
Abaqeshi bahlala bebuza lo mbuzo njengoko unika umbono ocacileyo wenjongo yomgqatswa yokufaka isicelo somsebenzi eThailand. Kuyabanceda kakhulu ukuba baqeshe ogqibeleleyo ohambelana nomsebenzi wabo ngokufanelekileyo. Uninzi lweenkampani zihlala zonwabile kwaye ziyaneliseka ukuba nodliwanondlebe kwi-Intanethi kusetyenziswa iskype okanye enye imithombo yeendaba. Nangona kunjalo, unokufumana iinkampani ezininzi ezikhetha udliwanondlebe ngobuso. Ihlala ixhomekeke kwimfuno yomqeshi ngendlela ekhethekileyo abafuna ngayo ukuqesha umgqatswa.
Ukukhangela umsebenzi eThailand, nazi iimfuno zabaphambukeli !!
Mininzi imisebenzi efumanekayo kubantu bamanye amazwe, kwaye uninzi lwazo ziyafumaneka kulwimi lwesiNgesi. Nangona unokufumana umsebenzi ngokwazi kwakho ukuthetha isiNgesi (okanye naluphi na olunye ulwimi), iindleko zakho zokuphila ziya kuba ngaphantsi kwento efunekayo. Njengokuhlala eThailand kungabizi kakhulu ukuba uhlala wedwa. Unokuqesha indlu encinci okanye mhlawumbi indlu encinci. Ngaphandle kwesakhono sokuthetha ulwimi, unokufuna ezinye izinto ngokunjalo.
Nantsi into oza kuyidinga, ngaphandle kolwazi lwakho lolwimi:
Ukuba bhetyebhetye kwijografi
Imvume yomsebenzi kunye nevisa
Makhe sixoxe ngamanye amanqaku aphambili kuluhlu olungentla ngokufutshane. Le nkcazo imfutshane iya kukunceda kakhulu ukuqokelela okanye ukuqokelela zonke izinto ezifanelekileyo.
Umbuzo wokuqala oza kubantu abaninzi abafuna ukuba banesidanga sokusebenza eThailand. Eyona mpendulo isisiseko kulo mbuzo uthi “kuyaxhomekeka." Kuhlala kuxhomekeke ekubeni loluphi uhlobo lomsebenzi ofaka isicelo kuwo.
Inokubakho imisebenzi emininzi engadingi nayiphi na idigri okanye iziqinisekiso. Nangona unesidanga sakho okanye isiqinisekiso kunye nawe siya kulonyusa ithuba lakho lokufumana umsebenzi ohlawula kakhulu. Njengolawulo, izidanga kufuneka zifumane umsebenzi we-agile kwaye ngendlela elula kakhulu.
Kwimimandla enje ngokuthengiswa kwezindlu, ukuthengisa, inkampani yemithombo yeendaba ihlala ingafuni naziphi na iidigri.
Nangona kunjalo, ukuba nezidanga zakho okanye izatifikethi zemfundo kunye nawe ziya kwenza inkqubo yevisa okanye ukuvumela kube lula.
Enye into ebalulekileyo esiyiqwalaseleyo kukwazi uLwimi njengoko iThailand inolwimi lwayo lwengingqi, "IsiThai." Nangona kunjalo, akunyanzelekanga ukuba kufuneka uthethe ulwimi lwesiThai ukuze ufumane umsebenzi eThailand.
Amazwe amaninzi enkcubeko ayakuvumela ukuba uthethe ezinye iilwimi ezinje ngesiNgesi okanye naluphi na ulwimi oludumileyo.
Ukuba ufuna ukukhula ngaphandle kweThailand, kuya kufuneka uyazi ulwimi lwaseThai njengoko luthethwa kakhulu.
Inkcubeko yaseThai yahluke kakhulu kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Abanye abantu bakufumene ukuziqhelanisa nenkcubeko yaseThai ngokuhlala kunzima.
Nangona kunjalo, unokufumana amathuba akho okunyuka ukuze uqeshwe ukuba unokuziqhelanisa ngokulula nendawo yokusebenza yenkcubeko. Ungakufezekisa oku ngokwenza uphando oluncinci malunga nenkcubeko yaseThai. Ungajonga kwezi zinto zilandelayo:
Imbali yenkcubeko yaseThai kunye nomzi mveliso
Ungakulungiselela njani ukusebenza eThailand
Imimiselo yabasebenzi eThailand
Ungayinika njani ingxelo kwaye uyamnkele (iyasebenza kubaphethe imisebenzi yolawulo yangaphambili)
Ngendlela yaseThai yokwenza ishishini, ezinye izinto zibandakanyiwe.
Imisebenzi edumile eThailand:
Ukuza kweyona misebenzi ifanelekileyo eThailand, imisebenzi yezobuchwephesha iyimfuneko, ngaphandle kwamathandabuzo. Imisebenzi yobuchwephesha ibandakanya izakhono kwiinkalo ezahlukeneyo ezinje ngobunjineli, i-IT, kunye nezinye kwimfuno. Ngaphandle kwemisebenzi yobuchwephesha, izakhono ezininzi zifunwa kakhulu. Izakhono ezinje ngeAccounting, ukuThengisa, kunye noLawulo nazo zikwimfuno ephezulu. Ngaphandle kwemisebenzi yezobugcisa efunekayo, imisebenzi yokuthengisa yenye yezona mfuno ziphezulu. Nalu uluhlu lwemisebenzi emihlanu ethandwa kakhulu eThailand:
Uninzi lweenkampani zifuna abasebenzi bazo abathengayo ukuba bazi ngazo zombini ezobuchwephesha kunye nezingezozobuchwephesha, kananjalo uninzi lomsebenzi wokuthengisa uvela nakwenye inkampani yeenjineli. Ke, iya kuba yindawo yokudibanisa ukuba uyazi omabini la masimi.
Umfanekiso weqweqwe elingasentla ngumfanekiso we UJon Tyson on Unsplash
Imisebenzi eThailandSebenza eThailand
Ungaya njani eJamani ngaphandle komsebenzi?
Uwufumana njani uMsebenzi, Uluhlu lweeMisebenzi eziPhezulu eziPhezulu ePalestina
Ufumana njani umsebenzi eMilwaukee?
Ungawufumana njani umsebenzi e-UK? Isikhokelo esifutshane kuye wonke umntu, abantu basemzini kunye nabahlali baseBritane
Ufumana njani umsebenzi eDhaka